Gaari Qarax sida iyo Is-miidaamiyihii waday oo lagu qabtay Baxdo iyo Jabka gaaray Alshabaab - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Gaari Qarax sida iyo Is-miidaamiyihii waday oo lagu qabtay Baxdo iyo Jabka gaaray Alshabaab - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Maleeshiyada degaanka ee magaalada Baxdo, Gobolka Galgaduud ayaa qabtay Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo ruuxii is-miidaamiye ahaa ee waday, kaasoo qeyb ka ahaa dagaalkii ay Alshabaab saaka ku qaadeen degaankaasi.
Gaarigan iyo ninkii waday ayaa lagu soo bandhigay degaanka Baxdo oo saaka dagaal qaraar ku dhex maray dadka degaanka iyo Alshabaab, kaasoo qasaare iyo jab weyn lagu gaarsiiyey kooxda Alshabaab, loogana dilay ilaa 16 maleeshiyo sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo soo bandhigtay qaar ka mida meydadka Alshabaab.
Gaariga qaraxyada lga soo buuxiyey ayaa ahaa nooca Land Cruizer VX oo lag ualxamay biro waaweyn, lagana buuxiyay qaraxyo, biro iyo alaabo kale oo qarxa.
Previous articleDagaal Culus oo ka dhacay degaanka Baxdo iyo Alshabaab oo qiratay Maleeshiyo laga laayey…
Next articleMaleeshiyadii ugu badneyd oo Alshabaab looga dilay Dagaalkii Baxdo iyo Gawaari u Qarxi waayey